Uncategorized – YGT
အရည်အသွေးပြည့်မီသော မှန်အမျိုးအစားစုံလင်စွာကို မှာယူကြသော ရန်ကုန်မြို့တွင်းမှ YGT Customer များအတွက် အရောက်ပို့ဝန်ဆောင်မှုကိုလည်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ စတုရန်းပေ ၂၀၀ အောက် မှာယူသော Customer များအတွက် Delivery Charge ကျသင့်မှာဖြစ်ပြီး စတုန်ရန်းပေ ၂၀၀ နဲ့ အထက် မှာယူသော Customer များအတွက်ကတော့ အခမဲ့ပို့ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ […]
Tempered Glass တွေဟာ Float Glass တွေထက် ပိုမိုမာကျောပြီး လေဒဏ်မိုးဒဏ်တွေမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်၊ မတော်တဆ ကွဲသွားရင်တောင် လူကိုအန္တရာယ်မဖြစ်စေနိုင်တဲ့ သေးငယ်သော Crystal လေးများအဖြစ် ကွဲထွက်သွားတာကြောင့် Safety Glass အမျိုးအစားတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်၊ ဘယ်လိုနေရာတွေအတွက် အသုံးပြုနိုင်လဲ? Safety Glass အမျိုးအစားဖြစ်လို့ Public Area […]
Quality ပြည့်မီတဲ့ မှန်ဆိုတာ ဘယ်လိုအချက်တွေကိုကြည့်ပြီး သိနိုင်သလဲ မှန်မျက်နှာပြင်ညီညာချောမွေ့ရမယ်။ ကြည်လင်ပြတ်သားပြီး အစင်းရာ မရှိသလောက်နည်းပါးရမယ်။ Wave ဖြစ်ခြင်း၊ Bubble ထခြင်း ကင်းစင်ရမယ်။ ဒီလိုအချက်တွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ မှန်တွေကို ဘယ်မှာရနိုင်လဲ Customer များရဲ့ လိုအပ်ချက်ကို အကောင်းဆုံးဖြည့်ဆည်းပေးနေတဲ့ YGT ရှိပါတယ်။ Float Glass၊ Tinted […]
YGT မှ အရည်အသွေးပြည့်မီသော Float Glass ၊ Tinted Glass နဲ့ Low Emissivity (Low-e)Glass များကို အသုံးပြုပြီး Quality ကောင်းမွန်သောTempered Glass ၊ Laminated Glass ၊ Tempered-Laminated Glass ၊ Laminated – […]
Temper Glass ဖြစ်ဖို့ဆိုတာ
Tempered Glass ကို ယနေ့ခေတ် ခေတ်မှီအဆောက်အဦးတွေမှာ အသုံးများလာကြပါတယ်၊ Tempered Glass တွေဟာ သာမန် မှန်တွေထက် လေးဆ ပိုမိုမာကျောပြီး ကွဲကြေသွားရင်တောင် Crystal အစိတ်အပိုင်းများအဖြစ် ကွဲသွားတာကြောင့် safety ဖြစ်စေပါတယ်၊ အဲ့လို Safety ဖြစ်စေဖို့အတွက်လည်း Processing လုပ်တဲ့အခါမှာ အောက်ပါတို့ကို ပြုလုပ်ရပါတယ်…. […]
“မှန်” တစ်ချပ်ရဲ့ Quality ကို ဘယ်အချက်တွေနဲ့တိုင်းတာနိုင်မလဲ?
လုံခြုံစိတ်ချမှုအပြည့်အဝပေးနိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ အချက်နဲ့တိုင်းတာနိုင်ပါတယ်၊ မိမိအသုံးပြုလိုက်သော မှန်တစ်ချပ်ဟာ မိမိနဲ့မိမိပတ်ဝန်းကျင်ကို လုံခြုံစိတ်ချ စေဖို့ အရေးကြီးပါတယ်၊ လူကြီးမင်းရဲ့ အဆောက်အဦး အတွက်လိုအပ်သော အရည်အသွေးမြင့် မှန်အမျိုးအစားများကို ကျွန်တော်တို့ Yangon Glass Tech မှ ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါပြီ၊ ယနေ့ခေတ် ခေတ်မှီအဆောက်အဦးများတွင် အလှအပအတွက်ရော လုံခြုံရေးအတွက်ပါ မဖြစ်မနေအသုံးပြုကျတဲ့ Tempered Glass, […]
မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ အဆောက်အဦးကို အလှဆင်ဖို့ အရည်အသွေးပြည့်မီပြီး အရောင်အသွေးစုံလင်လှတဲ့ မှန်တွေလိုအပ်နေပါသလား…
Glass Skylight ၊ Glass Canopy ၊ Glass Partitioning အစရှိတဲ့ လုပ်ငန်းများနဲ့ အခြားသောအတွင်းပိုင်း အလှဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းများအတွက် Quality အကောင်းဆုံးမှန်တွေလိုအပ်နေပြီလား… “ဟယ်လို” တစ်ချက်နဲ့ မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးမယ့် YGT လာပါပြီ။ မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ အဆောက်အဦးအတွင်းအပြင် အလှဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းများအတွက်လိုအပ်သော မှန်အမျိုးအစားစုံလင်စွာကို YGT မှ […]